Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana any Mexico » Ny mason-doza Olaf dia mijery an'i Mexico
Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • Resorts • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Rivo-doza Olaf tonga-sary natolotry ny The Weather Channel
Ny rivodoza Olaf dia nitondra ny rivony mahery sy oram-be tany amin'ny saikinosy Baja California any Mexico anio alina izay mamokatra be ny Resorts any amin'io faritra io.
Raha ny filazan'ny Ivotoerana Rivotra Iraisam-pirenena amerikana dia mety haharitra mandritra ny alina ny tadin'ny tafio-drivotra 105 kilometatra isan'ora sy oram-batravatra hatramin'ny 15 santimetatra.
Ny rivodoza Olaf dia andrasana handroso avaratra-avaratra andrefana ary afaka hatanjaka alohan'ny hamelezany ny morontsiraka.
Nakatona vonjimaika ny seranana ary nosokafana ny fialofana. Nidina am-baravarankely ny orinasa raha miandry andalana ny olona hividy enta-mavesatra sy kojakoja any amin'ny magazay lehibe.
Ka raha COVID-19 dia nahavita zavatra tsara iray angamba, dia nahatonga ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny hanana mpanjifa latsaky ny 40% any amin'ilay toerana haleha, izay hialokaloka eo amin'ny toerany.
Raha ny filazan'ny Ivotoerana Rivotra Iraisam-pirenena amerikana dia mety haharitra mandritra ny alina ny tadin'ny tafio-drivotra 105 kilometatra isan'ora sy oram-batravatra hatramin'ny 15 santimetatra mandritra ny alina ary mety hiteraka tondra-drano sy fihotsahan'ny rano.
Ny filohan'ny Fikambanan'ny Hotely Los Cabos, Lilzi Orci, dia nanambara fa sidina fiaramanidina anatiny sy iraisampirenena 37 no nofoanana ary tombanana ho 20,000 XNUMX ny mpizahatany vahiny ao amin'io faritra io.
Rehefa alina ny andro, ny rivodoza Olaf dia antenaina hianatsinanana avaratra-avaratra andrefana ary afaka hatanjaka alohan'ny hamelezany ny morontsiraka.
Araka ny National Center Rivo-doza, Olaf dia vinavinaina hifindra eo amin'ny faritra akaiky ny Baja California Sur anio alina sy zoma. Nanomboka tao anatin'ny faritra atsimon'ny faritra fampitandremana ny rivo-doza anio hariva ny toetr'andro ary hiparitaka avaratra hatramin'ny zoma.
Ny oram-batravatra mifandraika amin'i Olaf dia andrasana manerana ny faritra atsimon'ny Baja California Sur hatramin'ny zoma. Izany dia hiteraka loza mitatao amin'ny tondra-drano manan-danja sy mampidi-doza ary ny tondra-drano.
“Mihamafy tokoa ny tafiotra olaf, mianjera ny onja manakaiky ny @MontageLosCabos. Mivonto ny rivotra ary mifofofofo ny rivotra. ”
Fanavaozana vao tsy ela akory izay
Ny fanavaozam-baovao farany indrindra tao amin'ny tranokalan'ny masoivohon'ny governemanta Oceanic and Atmospheric Administration dia nilaza hoe:
Saripika avy amin'ny radara Meksikana ao Cabo San Lucas, miaraka amin'ny sary zanabolana, dia manondro fa ny mason'i Olaf dia hidina any akaikin'i San Jose del Cabo, ary efa niparitaka teny amoron-dranomasina ny toetr'ireo rivodoza teo amin'ny eyewall avaratra andrefana.
Ny tampon'ny rahona eyewall dia nilamindamina nandritra ny ora vitsy lasa izay, ary ny tombana amin'ny tanjaky ny tanjon'ny CIMSS ADT dia nitombo hatramin'ny 90 kt. Miorina amin'izany sy ny fitomboan'ny fandaminana ny eyewall amin'ny sary Cabo radar, ny haavon'ny voalohany dia nitombo ho 85 kt.
"… Tokony ho tamin'ny 7:40 hariva tany San Jose del Cabo, rehefa nanomboka tena ripaka izy io, saingy talohan'ny namonoana ny herinaratra."
Ny hetsika voalohany dia 325/10. Olaf dia tokony hanohy hihetsika avaratra-andrefana mankany avaratra-avaratra andrefana mandritra ny 12-24 ora manaraka, miaraka amin'ny foibe mihetsika manakaiky ny faritra atsimon'ny saikinosy Baja California mandritra io fotoana io. Aorian'izany, ny tampon'ny havoana midina miankandrefana avy any atsimo andrefan'ny Etazonia dia tokony hivadika miankandrefana i Olaf, ary tokony harahina fiakarana miankandrefana izany satria ny rivodoza mihaosa dia mihazakazaka midina avaratra atsinanana.
Ny torolàlana momba ny vina dia niova kely hatramin'ny nanolorana ny torohevitra teo aloha, ary ny lalan'ny vinavinan'ny toetr'andro dia tsy misy fanovana kely fotsiny amin'ny vinavina teo aloha.
Andrasana ny fahalemena tsikelikely mandritra ny 24 ora voalohany rehefa mifanerasera amin'ny saikinosy Baja California i Olaf. Rehefa mivily miankandrefana ny sikilasy aorian'ny 24 ora dia tokony hifindra ambonin'ny rano mangatsiaka kokoa izy io ary ho lasa masinina maina kokoa. Ity fifangaroana ity dia tokony hiteraka fahasimbana amin'ny kaonferansa, ka ny rafitra dia lasa ambany aorian'ny tropikaly hatramin'ny 60 ora ary ny sisa ambany dia 72 ora. Ny vinavina hamafin'ny hery vaovao dia misy fiovana kely amin'ny vinavina teo aloha, ary eo afovoan'ny valopy fitarihana intensité no misy azy.
Nandeha mafy tamin'io i Mexico tato ho ato. Vao 2 andro lasa izay, a Horohoron-tany 7.1 namely an'i Acapulco.